Mpanamboatra sy mpamatsy bisikileta E-bisikileta - Orinasa miondrana e-bisikileta any Tsina
SEBIC 20 inch aluminium miafina bateria miafina mametaka bisikileta elektrika
Ebike tia-tontolo iainana sy mivalona ho an'ny olon-dehibe sy ny tanora izay mana-tarehy, matanjaka ary namboarina miaraka amin'ny akora ilaina ilaina hivezivezena amin'ny arabe mafy ao an-tanàna. Maivana nefa maharitra, ny endriny alim-pito azo alefa dia manakorontana ireo endri-javatra tadiavina sy ny top specs. Môtô 250-watt mahery vaika avo. Kilometatra lava. Bateria lithium-ion 36V azo esorina.
SEBIC 20 mirefy 8 haingam-pandeha fampiatoana bisikileta elektrika 48v 500w
Ny fampidirana ny moto 500-e an'ny bisikileta dia tsotra toy ny fanodinana entana - ny sensor ny hafainganam-pandeha dia milaza amin'ny batterie hiditra miaraka amin'ny fanampiana hafainganam-pandeha tokana hahazoana antoka fa mivoaka haingana sy milamina ianao. Miaraka amin'ny lasely sy alim-baravarana azo ahitsy, ireo izay mitady fampidirana ny tontolon'ny fivezivezena ara-tontolo iainana dia afaka manao izany amin'ny alàlan'ity bisikileta e-bisikileta avo lenta ity.
Bisikileta elektrika azo aforitra kambana kely 16 SEBIC
Ny haben'ny frame dia 16 santimetatra, maivana ary malefaka, manodidina ny 20KG ny lanjany, io no safidy tsara indrindra ho an'ireo mpandeha.
Ny Ebike miaraka amina fampiatoana any aoriana dia mampahazo aina anao kokoa rehefa mitaingina ny arabe an-tendrombohitra ianao.
SEBIC 20 inch mini ebike azo aforitra
MOTOR 250W-350W mahery: Miaraka amina motera haingam-pandeha haingam-pandeha 350W, napetaka amin'ny kodiarana any aoriana, mampitombo ny herin'ny fiakarana havoana matanjaka kokoa, manome hery ampy ho an'ny fivezivezena isan'andro, mandeha eny an-tendrombohitra na mihodina amin'ny lalana tianao indrindra. Miaraka amin'ny hafainganam-pandeha hatramin'ny 20 mph, hitondra anao haingana any ianao. Mifanaraka mora amin'ny terrains isan-karazany, mitondra anao hankafy ny fialamboly ivelany.
SEBIC 26 mirefy aloywheel tanàna bisikileta fanamoriana herinaratra maotera
GEAR UP AMIN'NY SAINGA 7 - mianika havoana toy ny lehiben'ny bisikileta mandeha amin'ny alàlan'ny bisikileta mandeha amin'ny herinaratra SHIMANO 7 miova ho an'ny marim-pototra azo antoka sy mifehy izay irin'ny mpitaingina bisikileta rehetra.
SEBIC fahazavana vaovao mahafinaritra 20 inch mivalona bisikileta mini
Ny bisikileta elektrika mahery vaika dia afaka manohana mpampiasa hatramin'ny 220lb, motera matanjaka 240W, 15-25km elatra madio madio ary 25-35 km amin'ny alàlan'ny fanampiana herinaratra. Ity bisikileta elektrika ity dia hanome anao làlana mety sy mahomby ho an'ny asa na ny sekoly, tsy misy bus na metro feno olona intsony. Ankoatr'izay, miaraka amina endrika amboarina, mety hitahiry habaka be dia be kokoa raha tehirizina rehefa tsy ampiasaina.
Fampiroboroboana SEBIC bisikileta elektrika 20 mirefy
Ny eLife Infusion dia mety indrindra ho an'ireo izay mitady vahaolana azo antoka amin'ny diany isan'andro na maniry fialamboly kely. Ny Infusion dia hitondra anao hatramin'ny 30 kilaometatra amin'ny 15.5mph amin'ny vola tokana (miankina amin'ny lanjan'ny mpitaingina sy ny faritra rakotra) ny mileage.
SEBIC fivezivezena an-tanàn-dehibe azo atsimbina bisikileta elektrika maivana 16 mirefy
SEBIC kodiarana matavy mavesatra mihantona feno fampiatoana bisikileta moutain 20 mirefy
Ny haben'ny frame dia 20 santimetatra, firaka aliminioma, fomba ebike matavy, tena matanjaka sy mangatsiatsiaka tokoa.